Viber ကို PC ပေါ်မှာ Video Call ပါ သုံးနိုင်ပြီး. ~ Saw Chit Diary
No comments | Friday, May 17, 2013
အခု viber ကို မိမိကွန်ပျူတာ PC မှာ Video Call ရော အသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်တယ် .
Viber ကနေပြီးတော့ Bata Version အနေနဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။
iPhone/ Android Phone/ NOKIA / Window XP ,7, Vista ,window 8 တို့မှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Account Activate လုပ်နည်းကတော့ ဖုန်းမှာ လုပ်သလိုပါဘဲလွယ်ကူပါ
တယ်။ အခု PC Version မှာတော့ Video Call ပါ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းအားလုံးစိတ်ဝင်
လိုအပ်ရင်တော့ ဒီမူရင်းလင့်မှာ သွားဒေါင်းလိုက်နော်
Get Download here...